Inye iMagazini endiyihlawulelayo: Martech Zone
Inye iMagazini endiyibhatalelayo: Inentambo
NgoMvulo, nge-26 kaJanuwari, 2009 NgoMvulo, nge-26 kaJanuwari, 2009 Douglas Karr
Abahlobo bam bayazi ukuba ndiyincwasimende yencwadi. Ndiyazithanda iincwadi ezinoqweqwe oluqinileyo. Akukho nto injengokuqhekeka komqolo oyintombi kunye nevumba lephepha elimnandi nge-inki entsha kuyo. Incwadi entsha iziva ingathi sisipho kum… kwaye yeyam, yeyam yonke!
Ndisebenza kwi-snobbishness yam ekhuni, nangona! Andikwazi kunceda kodwa ndiziva ndinetyala kuzo zonke iincwadi ezifumba ecaleni kwendlu yam efanele ukufundwa ngabanye abangakulungelanga ukukhwehlela ixabiso elinoqweqwe. Ndizakufika apho, ndiyathembisa. Kwiveki enye okanye enye, ndiza kwenza ukhuphiswano ndinike ibhokisi yezinto ezingafundwanga ezilukhuni… ziseplastikini yabo. Hlala kufuphi!
Nokuba kunjalo… nokuba ndiyathanda ukuziva iphepha, ndiyekile ukufunda amaphephandaba kwiminyaka eyadlulayo. Bendithetha no UJohn Ketzenberger, Intatheli ye-Star Business reporter (ijolise ekujongeni) malunga nayo kwiveki okanye edlulileyo. Ndiyekile ukuthenga iphephandaba xa ubuntatheli butshintshile ukusuka kwimveliso ukuya kugcwaliso phakathi kwentengiso.
Ndiyekile ukuthenga amaphephandaba xa amaphephandaba aqala ukubhengeza ukuba zingaphi iikhuphoni ezipapashwe ngeCawe endaweni yokuba zininzi iindaba abazibonileyo. Kusandikhathaza nangoku. Ukuba bekungekho kwikholamu kaJohn, andiqinisekanga ukuba ndingakhe ndifunde i-Indianapolis Star kwi-intanethi, nokuba.
Kusekho upapasho olunye lokushicilela endingenakulinda ukuba lutyhileke kwaye luvuleke, nangona… kwaye kunjalo Iphephancwadi elinentambo. Ndiyekile ukubhalisa kwiminyaka eyadlulayo xa batshintshela kwimifanekiso emikhulu, ushicilelo oluncinci… kodwa isibini sokugqibela seminyaka besingakholeleki. Akusekho kubuchwephesha bobugcisa- onke amanqaku aguqula iphepha. Zimbalwa kakhulu ii-editions endingazidliyo ukusuka kwiphepha ukuya kwiphepha. Ndifunde umva kunyaka ophelileyo ndaze ndabona ukuba ndibhloga malunga namanqaku anentambo kanye kwiinyanga ezi-2 ukuya kwezi-3.
Iphephancwadi elinentambo lale Nyanga:
Ngaphakathi kuHlaziyo lweGPS: Izicelo ezili-10 ezenza uninzi lwendawo
Ubongameli obunentambo: Ngaba u-Obama angayiqala kwakhona i-White House?
Icebo lokubulala uGoogle
I-DIY ye-DIY: Inzame kaTata omnye yokuKhangela iKhowudi yeNdalo yeNtombi yakhe
INkosi emnyama ye-Broadband izama ukulungisa umfanekiso weComcast
Kuba la manqaku sele ekwi-intanethi, ndingakucela umngeni ngokwenene ukuba ufunde la manqaku. Ukuba usuku lwakho lugcwele ukufundwa kwebhlog kwaye ungomnye wabo bantu bayazibuza ukuba kutheni sisafuna iintatheli kwakhona, naliphi na kula manqaku kufuneka litshintshe ingqondo. Inkathalo kunye nokubhala kubekwe kwinqaku ngalinye kula maphepha lihamba ... kwiphepha… kwesikrini.
Xa ndicinga malunga nokuba ndibhatala malini ngencwadi elungileyo enoqweqwe oluqinileyo, kwaye yimalini endiyibiza ngeMagazini eyiWired- ndiyazibuza ukuba kutheni ndingahlawuli ngaphezulu kokubhaliselwa kwam. Akukho lindixesha mnye kwimarike ethatha ingqalelo yam kwaye inika ingxelo kakhulu kwicandelo lobuchwephesha nakwi-Wired.
Andikwazi kulinda kude kube neNyanga ezayo!
tags: imikhwa yokuthengaIsicwangciso sonxibelelwano
Iintsuku ezi-4 ezilahlekileyo kwi-Intanethi
Ukuthengisa kwiinjongo, hayi iiBhola zamehlo
Jan 27, 2009 kwi-3: 02 AM
Nam ngokwam ndiyamthanda iWired kodwa ndiye ndaphinda ndaphinda ndathandana. Ndiyayifunda ngoku.
Jan 29, 2009 kwi-2: 13 AM
I-Wired kuphela kwento endibambelele kuyo. Ndingumdlali weqonga kwaye ndifumene iGame Informer kule minyaka mi-2 idlulileyo okanye kunjalo, kodwa kungenxa yokuba iza nekhadi lesaphulelo seGame Stop.
Jan 29, 2009 kwi-11: 37 AM
Abafundi abathe rhoqo bebhlog yethu (www.inmedialog.com) baya kwazi ukuba singabaxhasi abanomdla wokugqwesa kubuntatheli nokuba injani na. Ndivelana nabo kufuneka babandezeleke liphephandaba lemihla ngemihla ledolophu yasekhaya kwindawo yesibini okanye yesithathu; ngokuqinisekileyo kunjalo apha e-Ottawa, eCanada, apho i-rag yasekhaya yimeko eyothusayo yogqatso lobunini bemithombo yeendaba ukuya ezantsi.
Sinethamsanqa, nangona kunjalo, ngokuba sinephephandaba lesizwe lemihla ngemihla elibalaseleyo, iGlobe and Mail, elihlala emnyango wam rhoqo kusasa. Bekuyimfuneko ukuqhubela phambili ukuya ngasemva ebomini bam ngaphezu kweminyaka engama-25 ikhona. Ibalwa njengelinye lawona maphepha-ndaba abalaseleyo esiNgesi ehlabathini.
Ukufunda iGlobe yonke imihla kundishiya ndinexesha elininzi lamanye amaphepha-ndaba njengoko wazityand’ igila ukuba ulikhoboka lomqolo, uDouglas, kodwa ndabelana ngothando lwakho noWired. Ibe yimagazini yam yokuqala yetekhnoloji ukusukela oko iBusiness 2.0 laya phantsi. (Unokufunda i-obit yam ye-2.0 apha: http://inmedialog.com/index.php/archives/a-business-20-titan-bows-out/) Inezinto ezininzi zegajethi kunye ne-geek kwaye ngaphantsi kweshishini elibethayo kune-2.0, kodwa ukubhala kugqwesileyo, iimpawu zidla ngokuphandwa kakuhle kwaye zicingisise kwaye ngexesha lokugqiba ngalo, yonke into. Ushicilelo luneekona zamaphepha ezininzi ezigobe umva ukundikhumbuza ukuba ndijonge phambili kuyo yonke into ebhalwe ngayo kwelo phepha.
Sifumana amanqaku amaphephancwadi ahanjiswa kwi-arhente yethu ye-PR egxile kwi-tech rhoqo ngeveki; I-Wired kuphela kwabasebenzi abayalelweyo ukuba babekwe phezu kwedesika yam nje ukuba ifike.
NgoJanuwari 29, 2009 ngo-12:24 PM
Ndifumene ukusebenza neGlobe kunye neMayile malunga ne-5 okanye i-6 kwiminyaka eyadlulayo kwaye ndiyavumelana novavanyo lwakho. IGlobe, ngelo xesha, yayikhathazeke kakhulu ngokufikelela kwi abaphulaphuli abafanelekileyo… hayi ukufikelela nabani na onokuthenga iphepha. Bakunqanda ukuthotywa – konke oku kwanika iphephandaba ngexabiso elithe chatha. I-Globe kunye ne-Mail inokuyogqitha i-Wall Street Journal njengelona phephandaba lezoshishino libalaseleyo emhlabeni. Liphepha elihle kunye nombutho omkhulu!